Scary Movie4(2006) | MM Movie Store
Scary Movie ဆိုတာကတော့ သူ့ခတျေအခါက နာမညျကွီးမှနျသမြှတှကေို ဟာသသကျသကျ လှောငျပွောငျထားသောဇာတျကားမြားဖွဈပါတယျ။အထူးသဖွငျ့တော့ နာမညျကွီး ဇာတျကားတှေ သရုပျဆောငျတှကေို လှောငျပွောငျထားတာပါ။
မူရငျးဇာတျကားတှကေို ကွညျ့ဖူးထားရငျ Scary Movie ရဲ့ လှောငျပွောငျခကျြတှကေ အတျောလေး ခှီနရေပါတယျ။(Scary Movie စုစုပေါငျး ၅ ကားထှကျထားပါတယျ။အခုကတော့ နံပါတျ ၄ ဇာတျကားကိုတငျပေးလိုကျတာပါ။
နောကျဇာတျကားတှကေိုလဲ အဆငျခြောသလို တငျဆကျသှားပါ့မယျ။တဈကားနဲ့တဈကား အဆကျအစပျမရှိတဲ့အတှကျဘယျကကွညျ့ကွညျ့အဆငျပွပေါတယျ။)
ဒီနံပါတျ ၄ ဇာတျကားထဲမှာ….Arachnophobia (1990)…Final Destination (2000)…Thir13en Ghosts (2001)….R. Kelly: Bump and Grind – You Be the Judge (2002)….Saw (2004)….Scooby Doo 2: Monsters Unleashed (2004) ….Shaun of the Dead (2004)….Kill Bill: Vol.2(2004) ….
What the #$*! Do We (K)now!? (2004)…..The Village (2004) …..The Grudge (2004) ….Million Dollar Baby (2004)….Hustle and Flow (2005) …..The Amityville Horror (2005) ….”
The Oprah Winfrey Show: Episode dated 23 May 2005″ (2005)…..War of the Worlds (2005) …..Dark Water (2005) ….Deuce Bigalow: European Gigolo (2005) ….The 40 Year Old Virgin (2005)…..Brokeback Mountain (2005)….Saw II (2005)
စတဲ့ဇာတျကားတှကေို ဟာသဖောကျထားတာကွောငျ့ အဲ့ဒီဇာတျကားတှကေို ကွညျ့ဖူးထားရငျ ပိုရယျရမှာပါ။Scary Movie တှနေဲ့ ပတျသတျပွီး မှတျမိနတောကတော့….ကြှနျတျော ငယျငယျတုနျးက… Horror ဇာတျကားဆိုရငျ ညဖကျ အိပျမပြျောအောငျထိ ကွောကျခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Scary Movie တှေ ကွညျ့ပွီးနောကျမှာ ဘယျ Horror ဇာတျကားမှ မကွောကျတတျတော့ပါ။သူတို့လှောငျထားတဲ့ Horror ဇာတျကားတှကွေညျ့ပွီး ရယျပဲရယျခငျြတော့ပါတယျ။
Scary Movie ဆိုတာကတော့ သူ့ခေတ်အခါက နာမည်ကြီးမှန်သမျှတွေကို ဟာသသက်သက် လှောင်ပြောင်ထားသောဇာတ်ကားများဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားတွေ သရုပ်ဆောင်တွေကို လှောင်ပြောင်ထားတာပါ။
မူရင်းဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ဖူးထားရင် Scary Movie ရဲ့ လှောင်ပြောင်ချက်တွေက အတော်လေး ခွီနေရပါတယ်။(Scary Movie စုစုပေါင်း ၅ ကားထွက်ထားပါတယ်။အခုကတော့ နံပါတ် ၄ ဇာတ်ကားကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။
နောက်ဇာတ်ကားတွေကိုလဲ အဆင်ချောသလို တင်ဆက်သွားပါ့မယ်။တစ်ကားနဲ့တစ်ကား အဆက်အစပ်မရှိတဲ့အတွက်ဘယ်ကကြည့်ကြည့်အဆင်ပြေပါတယ်။)
ဒီနံပါတ် ၄ ဇာတ်ကားထဲမှာ….Arachnophobia (1990)…Final Destination (2000)…Thir13en Ghosts (2001)….R. Kelly: Bump and Grind – You Be the Judge (2002)….Saw (2004)….Scooby Doo 2: Monsters Unleashed (2004) ….Shaun of the Dead (2004)….Kill Bill: Vol.2(2004) ….
စတဲ့ဇာတ်ကားတွေကို ဟာသဖောက်ထားတာကြောင့် အဲ့ဒီဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ဖူးထားရင် ပိုရယ်ရမှာပါ။Scary Movie တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မှတ်မိနေတာကတော့….ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက… Horror ဇာတ်ကားဆိုရင် ညဖက် အိပ်မပျော်အောင်ထိ ကြောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Scary Movie တွေ ကြည့်ပြီးနောက်မှာ ဘယ် Horror ဇာတ်ကားမှ မကြောက်တတ်တော့ပါ။သူတို့လှောင်ထားတဲ့ Horror ဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီး ရယ်ပဲရယ်ချင်တော့ပါတယ်။